Ogaden News Agency (ONA) – CWXO ayaa ku gaadhsiiyay cadawga khaasare kala duwan weeraradii ugu dambeeyay
CWXO ayaa ku gaadhsiiyay cadawga khaasare kala duwan weeraradii ugu dambeeyay
Posted by Dayr	/ April 3, 2012
CWXO ayaa weeraro uu ku qaaday bishii March dabayaaqadeedii fadhiisdimooyin ay leeyihiin ciidamada cadawga waxa uu ku gaadhsiiya khasaare balaadhan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaaladan oo isugu dhafnaa weeraro habaysan mir habeenimo iyo kamiin maalmeed ayaa dhamaan waxay u fuleen habkii loo qorsheeyay.
Dagaaladan ayaa ciidanka JWXO waxay cadawga kagala wareegeen hub iyo saanad milatari oo kala duwan, waxayna u kala dhaceen goobaha soo socda;
31/3/12 weeraro lagu qaaday deeganada Odolla iyo Shiniile oo ka wada tirsan degmada Qabri-dahar ayaa cadawga waxaa lagag dilay 9 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay
26/3/12 dagaal ka kala dhacay Xaaj-Mur oo ka tirsan degmada Baabili iyo Qansaxlay oo ka tirsan degmada Garbo ayaa waxaa ciidanka cadawga looga dilay 5 askari iyadoo ay jiraan dhaawacyo kale oo soo gaadhay .maalinka dib 27/3/12 weerar xoogan oo lagu qaaday meesha loo yaqaan Xaaji-Mur oo ka tirsan degmada Baabili ayaa waxaa ciidanka cadawga lagag dilay in ka badan 15 askari waxaana looga dhaawacay 27 kale isla taariikhdan ayaa ciidanka cadawga degmada Dhuxun fal gaadmo ah looga dilay hal askari 2 kalana loogaga dhaawacay .
24/3/12 weerar lagu qaaday Gaashaanka oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur ayaa waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 7 askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale
Sidoo kale 29/3/12 ayaa dagaal ka dhacay Karin-dheere oo ka tirsan degmada Qabridahar waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari waxaana looga dhaawacay 7 kale
Dhinaca kale waxaa jira dagaalo badan oo aan ilaa hada laga hayn faahfaahi buuxda kuwaas oo u badan mir habeenaad. Dagaaladan ayaa waxay ka kala dhaceen deegaanada kala ah; Ceel-xaar, Sanxaskule, Aadaamo, Galgalooli, Caado iyo Shabeelay. Dagaaladaa ayaa waxay kala dhaceen intii u dhaxaysay 24kii ilaa 31kii bisha 3aad ee 2012 waxaana cadawga loogu gaystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Ciidanka jabhadda ayaa wacad ku maray in ay cudud xoog leh kaga kiciyaan cadawga ku jooga dalkooda hooyo ,islamarkaana u balanqaaday shacbiga ogaadeenya inay u hurayaan dhiigooga sidii ay ku heli lahaayeen xoriyadooda .